Dogecoin Slumps, Falls 23% Sezvo Elon Musk Anotsoropodza DOGE Chinyorwa | Kubva kuLinux
Dogecoin Slumps, Falls 23% Sezvo Elon Musk Anotsoropodza DOGE Chinyorwa
El Dogecoin Iyo imwezve cryptocurrency, yakatorwa kubva kuLitecoin uye iyo inoshandisa iyo Shiba Inu imbwa kunge chipfuwo. Muchokwadi, icho chiratidzo akaberekwa sehutachiona meme kubva paInternet, izvo zvaisazoita kuti iwe ufungidzire kukosha kwaizosvika neiyi mari yemadhora, sezvo mwedzi wapfuura zvakaonekwa kukwira kwayakaita ne1000% yemutengo wayo, semhedzisiro yekubatana kwezvimwe zviito, sekubvumidzwa kwevanhu saGene Simmons (mimhanzi yeboka Kusvoda), Elon Musk (Tesla / SpaceX), kana rapper Snoop Imbwa.
Un fungidziro yekufamba iyo yakaunza purofiti huru kune vazhinji vanoshanda, asiwo kumwe kurasikirwa kune vamwe. Kutenda kune aya enhoroondo akakosha, zvakabva pakuva zvakakosha 0.007 euros muna Ndira 4, 2021 kusvika ku0.073 euros muna Kukadzi 7. Ndokureva, mukati memwedzi unopfuura chete wakadzora kutsamwa chaiko, izvo zvaigona kunge zvakaita kuti mari zhinji ikunde avo vaive vaisa mari apo mari yaive pamitengo yakaderera uye vakatengesa ichiramba yakanyanya.
Asi zvechokwadi, zvese zvinokwira zvinowira, uye Dogecoin (DOGE) yakanyura 23% mune imwe nyaya yemaawa ino Kukadzi 15. Naizvozvo, iyo yese hype inogadzirwa munguva yadarika, yaienda kunetseka shure Elon Musk achashandura misoro pane iyo isina kuenzana kugoverwa kweDOGE mari uye ichakurudzira varidzi vekutengesa kuti vatengese zvavakabata.
Mashoko eguru anga ave nawo chiitiko chakasimba. Iwe unotoziva kuti zvinhu zvidiki zvinogona kushandura zvakanyanya musika wemasheya, uye zvakare yekutengesa kukosha kweaya macryptocurrencies. Asi izvo zvakadikanwa naEron Musk ichokwadi, uye izvo ndezvekuti Dogecoin iri 28.7% mumaoko emunhu mumwe chete, uye vane gumi nevaviri vabati vane yavo ingangoita 12% yezviripo zviripo. Vanoda kusvika makumi manomwe kubva muzana yehuwandu hwese hunofungidzirwa kunge huri mumadhiresi anopfuura zana chete.
«Kana vese vakuru veDogecoin vanobata vakatengesa mari yavo zhinji, vanozove nerutsigiro rwangu ruzere. Mune mawonero angu, kuwanda kwakanyanya ndiyo yega dambudziko chairo«. Musk akataurwa.
Anenge maawa manomwe mushure meiyo meseji, mutengo weDogecoin yaive pasi 23%, kubva $ 0.063 kusvika $ 0.048.
Uyewo, muvambi iye amene Dogecoin nguva pfupi yadarika yakaratidza kuti yakanga yatengesa kambani yayo yese yeDOGE inobata mu2015 nekuda kwekunetseka kwemari mushure mekurasikirwa nebasa.
Billy markus Akataura kuti akatanga Dogecoin sedambe muna2013, kune iyo meme yandakadudza. Iye pachezvake akashamiswa nekukwira kukuru kwemari iyi, iyo panguva ipi yaasina kufunga kuti ingangosvika pamitengo iyoyo. Haana kufungidzira kuti kutamba kwaElon Musk naDogecoin kwaizomutyaira sezvaakaita, ndoda iye akafunga kuti iyeyu mutyairi aizovewo wekupedzisira kushungurudzika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Dogecoin Slumps, Falls 23% Sezvo Elon Musk Anotsoropodza DOGE Chinyorwa
GOS-P1: Kuongorora yakakura uye iri kukura Google Open Source - Chikamu 1
DVDStyler: Yemahara uye yepuratifomu app yekugadzira uye kunyora kweDVD